ग्लोबल हंगर ईन्डेक्स, जिएचर्आइः सुचकांकमा नेपाल कति स्थानमा ? - Samudrapari.com
ग्लोबल हंगर ईन्डेक्स, जिएचर्आइः सुचकांकमा नेपाल कति स्थानमा ?
काठमाडौं – विश्व भोक सुचकांक ग्लोबल हंगर ईन्डेक्स जिएचर्आइ मा नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ । यो सुचकांकमा नेपाल विश्वका एक सय १९ देशमा ७२ औं स्थानमा आइपुगेको छ ।
दक्षिण एयिाली देशमा नेपालको अवस्था सबैभन्दा राम्रो खतराजनक बर्गमा रहेको नेपाल १६ बर्षको अवधिमा सुधार भई मध्यम स्तर नजिक पुगेको ईन्टरनेटपिआईले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को रिपोर्टमा उल्लेछ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत सयौं, श्रीलंका ८४, बंगलादेश ८८ पाकिस्तान १०६, अफगानिस्तान १०७ औं स्थानमा छ ।